CDLF ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း SOG ညှစ်ထုတ်လိုက်
CDLF ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
CDLF စံလျှပ်စစ်မော်တာအားဖြင့်မောင်းနှင်သောဒေါင်လိုက် Non-မိမိကိုယ်ကို Prime multistage centrifugal စုပ်စက်, တစျမြိုးပါပဲ။ အဆိုပါမော်တာ output ကိုရိုးတံတိုက်ရိုက်နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်စုပ်စက်ဝင်ရိုးနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ အဆိုပါဖိအားပေးမှုခံနိုင်ရည်ဆလင်ဒါနေထိုင်သော့ခလောက်နှင့်အတူစုပ်စက်ခေါင်းနှင့်ဝင်ပေါက် & ထွက်ပေါက်အပိုင်းများအကြား fixed နေကြသည်။ အဆိုပါဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အတူတူလေယာဉ်မှာစုပ်စက်အောက်ခြေမှာတည်ရှိနေကြသည်။ စုပ်စက်၏ဤမျိုးကိုထိရောက်စွာ Out-of-အဆင့်နှင့် Overload ခြောက်သွေ့-ပြေးကနေတားဆီးဖို့အသိဉာဏ်ကာကွယ်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်:2500 အထိ m³ / h
3) စက်မှုအရည်သယ်ဆောင်: အေးနှင့်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဘွိုင်လာရေပေးဝေရေးနှင့်စနစ်, စက်-ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီ condensing ။
4) ရေကုသမှု: အစွန်းရောက် filtration စနစ်။
5) Osmosis System ကိုနောက်ပြန်။
6) ပေါင်းခံစနစ်, separator, ရေကူးကန်။
7) ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး: လယ်ယာမြေဆည်မြောင်း, ရေမှုန်ရေမွှားဆည်မြောင်း, ဆည်မြောင်းရွှဲ။
2. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို Class: IP55
4. စံဗို့အား: 50Hz: x ကို 220-230 1 / 240V
1SO9006 နောက်ဆက်တွဲအေနှင့်ညီညွတ်မှုအတွက် 2. Curve သည်းခံစိတ်
3. အတိုင်းအတာ 20 ℃ Air-အခမဲ့ရေနှင့်ပြုမိသည်။ mm2 / sec kinematic ထဲမှာပါတဲ့။
ယခင်: CHLF Horizontal Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
နောက်တစ်ခု: CDL ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဒေါင်လိုက် Multistage Pump
အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဒေါင်လိုက် Multistage ရေ Pump
Big စွမ်းဆောင်ရည်ဒေါင်လိုက် pump
Cdl & Gdl & CR ဒေါင်လိုက် Multistage Pump
ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးဒေါင်လိုက် Multistage Pump
အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် Booster ဒေါင်လိုက်ညှစ်ထုတ်လိုက်
High Quality ဒေါင်လိုက် Multistage ရေ Pump
တရုတ်ဒေါင်လိုက် Multistage Pump ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း
OEM ရေ pump ပေးသွင်း
Professional ကဒေါင်လိုက်ရေ Pump
pump ပျံ့နှံ့နေတဲ့ Professional ကရေ
Pump လွှဲပြောင်း Professional ကရေ
CNP နှင့်အတူတူ pump
ဒိန်းမတ် Grundfos အတူတူ pump
Grundfos နှင့်အတူတူညီ Pump
secondary ဖိအား Pump
secondary ရေပေးဝေရေး Pump
အထူးရေ pump Feed
ဒေါင်လိုက် Multistage centrifugal Pump
ဒေါင်လိုက် Multistage centrifugal ညှစ်ထုတ်လိုက်
ဒေါင်လိုက် Multistage ပျံ့နှံ့နေတဲ့ Pump
ဒေါင်လိုက် Multistage စောင်ရေ Pump
ဒေါင်လိုက် Multistage Pump ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဒေါင်လိုက် Multistage Pump စက်ရုံ
ဒေါင်လိုက် Multistage Pump ပေးသွင်း
ဒေါင်လိုက် Multistage ညှစ်ထုတ်လိုက်
ဒေါင်လိုက် Multistage ရေ Pump
ဒေါင်လိုက် Multistage ရေ Pump တရုတ်ပေးသွင်း
ဒေါင်လိုက် Multistage ရေလွှဲပြောင်း Pump
ဒေါင်လိုက်သံမဏိရေ Pump ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဒေါင်လိုက်ရေ Feed Pump
Grundfos နှင့်အတူရေ Pump တူဒီဇိုင်း